Ngabe ubhekene nokulahlekelwa okungalindelekile kwenani elikhulu labalandeli be-Instagram?
Kanye nokuba nenkinga yokukhomba izizathu ezidala lokhu ? kahle, kuyafana nathi. Ngihlale ngizibuza ukuthi kungani ngilahlekelwa abalandeli ku-Instagram naphezu kwayo yonke imizamo yami nakho konke engikwenzile ukuheha abalandeli.
Ngaphezu kwalokho, Ngifinyelele esiphethweni sokuthi yonke inkinga idinga isixazululo. Ngakho, kulesi sihloko, sizokusiza ukuthi ubone izizathu zokuthi kungani ulahlekelwa abalandeli bakho be-Instagram futhi sikusize uzixazulule.
Kungani Ulahlekelwa Abalandeli ku-Instagram ?
Ukulahlekelwa abalandeli kuyingxenye yemvelo yolwazi lwe-Instagram kanye nenqubo yokwakha i-akhawunti yakho ye-Instagram.. Akuwona wonke umuntu oyokwazisa njalo ukwaziswa kwakho, abanye abantu bangenza imisebenzi yokulandela bese beyeka ukulandela, futhi ungenza izenzo eziholela abanye ekungakulandeli ngaphandle kokwazi.
Kodwa inkinga yilena : kungani ngilahlekelwa abalandeli ku-Instagram ? Ukuze sinikeze impendulo yalo mbuzo, lapha sinikeze izizathu ezi-5 okungenzeka ukuthi kungani ulahlekelwa abanye noma iningi labalandeli bakho be-Instagram.
Izizathu ezi-5 zokuthi kungani ulahlekelwa abalandeli ku-Instagram
Facebook.	Abantu ku-Instagram baya bekhetha kakhulu
I-Instagram isinesikhathi eside ikhona ; inani labasebenzisi liye landa kancane kancane phakathi neminyaka futhi, ngakho-ke, abantu abaningi abakuthandayo mayelana nohlobo lokuqukethwe abathanda ukukubona kokuphakelayo kwabo kushintshile.
Lokhu kukhombisa ukuthi ungalahlekelwa abalandeli be-Instagram ngenxa yokuthumela okuqukethwe okudala noma okungabalulekile..
Facebook.	Awuvamisile ukuthumela ku-Instagram, noma Kaningi kakhulu.
Uma uqaphele ukuthi inani labalandeli ku-Instagram liyancipha ngokushesha kunokuba likhula, inqubo yakho yokuthumela ingaba necala.
Uma ungathumeli njalo, ababhalisile bakho ngeke babe nethuba lokufunda okuqukethwe kwakho esiphakelini sabo sezindaba, okungadala ukuthi bangabe besakulandela. Ngokwesinye isandla, uma uthumela kaningi, isho izikhathi eziyisithupha ngosuku noma ngaphezulu, kuyabhora futhi kungabangela ababhalisile bakho ukuthi bayeke ukukulandela.
Facebook.	Umbono wokuqala awufanelekile
Umbono wokuqala uyisisekelo, ngakho-ke qaphela ukuthi ungoni ! Kunoma ikuphi, ngaphandle kwezithombe zakho, into yokuqala abalandeli abasha abayibukayo yi-bio yakho, ngakho-ke qiniseka ukuthi uyigcwalisa ngezinkomba ezithembekile noma izingcaphuno.
isebenzisa indlela yokuzenzakalela yesitayela esithi Landela/Yeka ukulandela enezici ezimbalwa ezengeziwe.	Ukuntula Ukucaca kanye Nokungaguquguquki Ngendikimba
Uma okuphakelayo kwakho kwezindaba kuwubudlabha, ngezithombe ezihluke kakhulu, imibala engahambisani namathunzi kanye nekhwalithi yesithombe eguquguqukayo, uzifaka engozini yokuvala abangaba abalandeli. Ngokwesinye isandla, uma unokuqukethwe okuyingqayizivele nezici ezingaguquki, uzozuza abalandeli ngokuphazima kweso. Ngakho-ke qiniseka ukuthi uyadlala ngenkathi uhlala ungashintshi.
isebenzisa indlela yokuzenzakalela yesitayela esithi Landela/Yeka ukulandela enezici ezimbalwa ezengeziwe.	Amagama-ncazo ayisicefe noma angakhangi
Izithombe ezimangalisayo zingavusa injabulo kubalandeli bakho, kodwa amazwibela akhangayo adonsa ukunaka kwabafundi bakho. Ngakho-ke, uma amazwibela akho eyisicefe noma engakhangi, ababhalisile bakho bazoba nesithukuthezi futhi bangase bangakulandeli.
Izindlela ezi-5 zokuyilungisa
Facebook.	Yiba Ovumelana Nezimo Futhi Ujwayelane Nokushintsha
Ushintsho alunakugwenywa, ikakhulukazi kulo mhlaba osathuthuka naku-Instagram. Ngakho funda ukuzivumelanisa nezimo ezintsha futhi uvumelane nezimo endleleni yakho yokubhekana nazo.. Dala futhi wabelane ngokuqukethwe okuthrendayo nezihloko ekuphakeleni kwakho, futhi ngokungangabazeki uzothola inqwaba yabalandeli.
Facebook.	Yiba Nesikhundla Esilinganiselayo Nesivamile
Njengoba uthumela njalo kokuphakelayo kwakho, abalandeli bakho bazoqala ukufunda futhi bajwayelane nakakhulu nokuqukethwe ngakunye, ikakhulukazi uma kukhanga. Ngakho, ube nomsebenzi olinganiselayo futhi ovamile Okuthunyelwe okungu-1 kuye kwezi-2 ngosuku, futhi isibalo sakho sabalandeli sizokwanda.
Facebook.	Iphrofayili Eyaziwayo
Kulula : okudingayo nje izithombe ezidonsa amehlo nezisezingeni eliphezulu, kanye nezinkomba kanye neziqu ezihloniphekile kuphrofayela yakho. Ngale ndlela, abantu abakulandelayo bayofuna ukukulandela.
isebenzisa indlela yokuzenzakalela yesitayela esithi Landela/Yeka ukulandela enezici ezimbalwa ezengeziwe.	Ungaguquguquki futhi Unembe Kokuqukethwe Kwakho
Ukushintsha okuqukethwe kuvame ukucasula. Ngakho-ke, ube nokuqukethwe okunembile lapho uthumela ku-Instagram ; hlala endikimbeni eyodwa futhi udlale umdlalo. Nokho, ungakwazi ukushintsha okuqukethwe kwakho ngokusekelwe ezenzakalweni zekhalenda., njengoSuku lweValentine nezinye.
isebenzisa indlela yokuzenzakalela yesitayela esithi Landela/Yeka ukulandela enezici ezimbalwa ezengeziwe.	Yenza Inganekwane Ethakazelisayo Nephoqayo
Isithombe esisodwa sisodwa asanele ukuqoqa abalandeli ; nawe udinga inganekwane. Ukuba namagama-ncazo athakazelisayo kusiza ukuheha nokugcina abalandeli abaningi ku-akhawunti yakho. Lokhu kubalulekile kuzo zonke izinkundla zokuxhumana, ngakho-ke dala inganekwane ezovusa intshisekelo yabalandeli bakho bamanje nabazayo.
23 Izindlela zika-2021Ungalanda kanjani amavidiyo e-Instagram ku-iPhone yakho : 23 Izindlela zika-2021